Efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra
Alatsinainy 06 janoary 2020 — Herinandro manaraka ny Epifania — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 4, 12-17. 23-25 — Ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita fahazavana lehibe, ary ireo izay nitoetra tao amin'ny aloky ny fahafatesana no niposahan'ny mazava.
Tonga avy any Atsinanana izahay...
Alahady 05 janoary 2020 — Ny nisehoan'i Kristy — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 2, 1-12 — Efa nahita ny kintana tany Atsinanana izahay, ka nankaty mba hitsaoka ny Tompo.
Efa hitanay ny Mesia
Naseho ny : 4 janoary 2020
Sabotsy 04 janoary 2020 - Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 1, 25-42 - Andro masina no manazava antsika: tongava, ry firenena, ary avia hitsaoka ny Tompo; satria nidina ety ambonin’ny tany ny Hazavana lehibe.
Indro ny Zanak'Ondrin'Andriamanitra
Zoma 03 janoary 2020 — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 1, 29-34 — Tonga nofo ny Teny, ka nonina taty amintsika. Izay rehetra nandray Azy dia nomeny fahazoana ho tonga zanak’Andriamanitra.
Pejy 82 amin'ny 90